Rugby – Lalao iraisam-pirenena: tsy afa-bela tamin’ny Makis ny Oxford | NewsMada
Fifampitifirana nivaivay tao Toamasina: Jiolahy efatra lavo, rotiky ny balan’ny FIP sy ny USI ...novembre 25, 2020
Mise en accusation devant la HCJ: Un deuxième report ...novembre 25, 2020
Rugby – Lalao iraisam-pirenena: tsy afa-bela tamin’ny Makis ny Oxford
Par Taratra sur 24/09/2018
Resin’ny Makis de Madagascar, tamin’ny isa 37 no ho 32, ny Oxford University, teo amin’ny lalao fihantsiana miverina. Fihaonana, notanterahina omaly alahady, tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Efa tany amin’ny minitra farany vao tafavoaka mpandresy ny ekipam-pirenena malagasy.
Nanenjika anisa hatrany mantsy ny Makis de Madagascar, nanoloana ireo mpilalao anglisy. Nanantombo teo amin’ny haben’ny vatana ny Oxford University. Araka izany, nilalao tao anaty “avant” ary nanao tosika be ry zareo, notarihin’i Adams sy i Yong. Na teo aza izany, tsy niala fa niezaka nanohitra hatrany ny Makis, nahitana an-dry Garcia, Solo, Ginot. Nahatsindry baolina ihany anefa ry zareo, izay samy voatsaran’i Tom Handerstone avokoa. Tetsy ankilany, tsy nahafaty afa-tsy “hors-jeu” ny Makis.
Teo am-pialan-tsasatra, nitarika tamin’ny isa 21 no ho 6 ny Oxford University. Nanova paikady kosa ny mpilalao malagasy, teo amin’ny fizaram-potoana faharoa. Nanafaingana ny lalao tao anaty “trois quart”. Nahitam-bokany izany satria nahatonga baolina nentin-tanana ry zalahy. Nanomboka nifanakaiky ny isa, teny amin’ny solaitrabe.
Tsy nionona tamin’ny tombon’isa azony anefa ry zareo Anglisy fa nanohy nanafika hatrany. Vokany, nanao fahadisoana indroa misesy ny mpilalao malagasy ka voatery nilalao 13 ary anisan’izany i Solo. Taorian’izay, nahatonga baolina nentin-tanana ry zareo Oxford University ka nahalasa ny isa ho 32 no ho 23.
Feno 15 kosa ny isan’ny Makis, teo amin’ny 5 mn farany. Nanomboka reraka ny Anglisy. Tsy naharaka ny hazakazaky ny Makis intsony ry zalahy. Nisesy ny baolina nentin-tanana, nentin’i Ginot sy ry Hery. Tsy nijanona izany raha tsy 37.
Fifampitifirana nivaivay tao Toamasina: Jiolahy efatra lavo, rotiky ny balan’ny FIP sy ny USI 25/11/2020
Mise en accusation devant la HCJ: Un deuxième report 25/11/2020
TSA-Fifaninanana sary sokake: hifidy ny besinimaro 25/11/2020
Fampandrosoana maharitra: hanorenana indostria goavana ny any Atsimo Andrefana 25/11/2020
Spat Toamasina: hitohy ny asa fanitarana ny seranan-tsambo 25/11/2020